१. उमंगोट नदी
भारतको मेघालयमा एक नदी रहेको छ ‘उमंगोट नदी’, जसलाई भारतकै सबैभन्दा स्वच्छ पानी पनि भन्ने गरिन्छ । यो नदी मावल्यान्नांग गाउँ नजिकै रहेको छ । जुन गाउँलाई एशियाकै सबैभन्दा सफा गाउँ पनि भन्ने गरिन्छ । गाउँमा करीब ३०० घर रहेको छ र सबै घरहरु मिलेर नदीको सफाइमा सँधै ध्यान दिने गर्दछन् । सबैभन्दा अचम्मको कुरा यो नदीमा फोहोर गरेमा मानिसलाई ५ हजार भारु जरिवाना समेत लगाइने गरिन्छ ।
२. मरुभूमीसँगै जोडिएको समुद्र
नामीबीयामा एक यस्तो ठाउँ रहेको छ, जहाँ एट्लान्टिक महासागर यहाँको वेस्ट कोस्ट मरुभूमीसँग जोडिएको छ । यो विश्वकै सबैभन्दा पूरानो मरुभूमी समेत हो जुन ५ करोड वर्ष भन्दा पनि पूरानो रहेको बताइन्छ ।
३. ब्राजीलको एक झरना
विश्वभरमा पिउने पानीको अभाव कति मात्रामा रहेको छ त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर के तपाईलाई थाहा छ ? विश्वमा कुन देशमा सबैभन्दा बढी पानी रहेको छ जुन पानीलाई पिउन सकिन्छ ? यो देश रहेको छ ब्राजील । जहाँ नवीकरणीय पानी संसाधनको उच्चतम मात्रा रहेको छ जुन जम्मा ८,२३३ घनकिलोमिटर रहेको छ ।
सामान्यतया भन्ने गरिन्छ की नोट कागजबाट बन्ने गर्दछ, तर तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ की नोट कागजबाट नभई कपासबाट बन्छ । किनभने कपास कागजको तुलनामा अधिक बलियो हुन्छ र छिटो च्यातिँदैन ।
५. हरियल पंक्षी
भारतको महाराष्ट्रको राजकीय पंक्षी हरियल एक यस्तो चरा रहेको छ जुन कहिल्यै पनि धरतीमा आफ्नो खुट्टा राख्दैन । यिनीहरुलाई अग्ला–अग्ला रुख भएको जंगल मनपर्छ । यो चराले धेरैजसो आफ्नो गुँड वर तथा पिपलमा लगाउँछन् ।